"क्याम्पसमा कुनै अनियमितता भएको छैन": श्रीराम श्रेष्ठ | Trishuli Khabar - Trishuli News Network
अन्तर्वार्ता७ श्रावण २०७६, मंगलवार
“क्याम्पसमा कुनै अनियमितता भएको छैन”: श्रीराम श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नुवाकोट आर्दश बहुमुखी क्याम्पस
नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको गतिविधि कसरी अघि बढिरहेको छ ?
यो क्याम्पस ०४२ सालमा स्थापना भई पहिले मानविकी संकायको अध्यपन गर्ने अहिले मास्टर डिग्रिसम्म पढाई हुँदै आएको छ । यहाँमानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा संकायमा मास्टर डिग्रिसम्मको पढाई हुन्छ । मानविकी अन्र्तगत विएसडब्लु कक्षा पनि सञ्चालन गरेका छौँ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेमेष्टर प्रणाली लागू गरेपछि विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्र्तगत नै यो क्याम्पस सञ्चालन हुँदै आएको छ । यो क्याम्पसको सम्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने जग्गा, भौतिक संरचना र शैक्षिक सवालको कुरा गर्दा अरु क्याम्पस भन्दा स्तरोन्नती भएको छ । यो क्याम्पस स्थापना गर्दा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ तीन जिल्लाको केन्द्रको रुपमा स्थापना भएको हो । नुवाकोटका गाउँगाउँमा १८,२० वटा क्याम्पसहरु स्थापना भएको छ । तर, यो क्याम्पसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । राज्य पुर्नसंरचना भएपछि नुवाकोटको यो क्याम्पस शैक्षिक देखि भौतिक विकासलाई हेर्ने हो भने मिनि विश्वविद्यालय (आंगिक क्याम्पस)को रुपमा विकासित हुने तरखरमा रहेको छ ।
आंगिक क्याम्पसको रुपमा विकास गर्ने भनिरहँदा क्याम्पसभित्र थुप्रै विसंगति र राजनीतिक खिचातानी पनि रहेका छन् । अहिलेसम्म स्ववियु निर्वाचनसमेत भएको छैन छन् नी ?
त्रिभुवन विश्व विद्यालयअन्र्तगत सञ्चालन भइरहेको यो क्याम्पस टियुकै मान्यता र विधान अनुसार चल्दै आएको छ । यहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहन्छ । जिल्लाका अन्य प्राइभेट कलेजहरुमा स्ववियु रहँदैन । यद्यपि नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियु विद्यार्थीको छाता संगठन हो । क्याम्पस स्थापना भएपछि यहाँ समयसमयमा स्ववियु निर्वाचन हुँदै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त कलेजमा देशैभर गत फागुन १४ गते राष्ट्रिय रुपमा नै स्ववियु निर्वाचन भइरहँदा यहाँ रहेका विद्यार्थी संगठन वीच कुरा मिलेन । विद्यार्थी संगठनवीच सहमतिमा अर्को मिति तय गरियो, तर त्यो मितिमा पनि विद्यार्थी संगठनवीच कुरा मिलेन । त्यतिबेला हामीले निर्वाचन मण्डल पनि तयार पा¥यौँ । निर्वाचनको कार्यतालिका र आचारसंहिता बनाउँदा विद्यार्थी संगठनवीच छलफल गरेर बनाइनुपर्ने थियो । छोटो समय भएकाले त्यसो हुन सकेन । कार्यतालिकालाई लिएर विद्यार्थी संगठनवीच मतभेद भयो । सञ्चालक समितिले निर्वाचन मण्डललाई पूर्ण अधिकारसहित निर्वाचन गराउने जिम्मा दिएको थियो तर,विद्यार्थी संगठनवीच भएको मतभेदका कारण निर्वाचन समितिले निर्वाचन गराउन सकेन । म हिजो पनि विद्यार्थी क्षेत्रबाटै क्याम्पसको नेतृत्व गर्न आइपुगेको छु । मस्ववियु सदस्य, सचिव हुँदै सभापति समेत भइसकेको मान्छे । स्ववियु निर्वाचन हुँदा विद्यार्थीको हकअधिकार सुनिश्चित हुने र स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको रुपमा रहने यो निर्वाचन हुनुर्छ भन्ने पक्षमा म प्रतिवद्ध छु । त्रिभुवन विश्व विद्यालयले देश व्यापी निर्वाचन गराउँदा जति सजिलोसँग निर्वाचन गराउन सकिन्छ, आफैंले मिति तोकेर गर्दा विभिन्न खाले समस्या आउने रहेछ । एक दुई वटा मात्रै कलेजमा निर्वाचन गर्दा त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण विद्यार्थीहरु आफ्नै अडानमा हुने गर्दछन् । त्यही कारणले गर्दा यहाँ निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । स्ववियु निर्वाचन हुनुपर्छ । युनियनमार्फत नै विद्यार्थीहरुले प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ त्यसैले निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । त्रिविले तोकेको कार्यतालिकामा निर्वाचन गराए मात्रै सहज हुने रहेछ अन्य समयमा गराउँदा निकै समस्या पर्ने रहेछ भन्ने हाम्रो भोगाईले स्पष्ट पारेको छ ।
क्याम्पसमा विद्यार्थीमात्र होइन, प्राध्यापक र सञ्चालक समितिको पनि राजनीतिक गर्ने थलो बनेको छ नी ?
उच्च शिक्षा हासिल गर्ने थलो । विद्यार्थी भनेका भविष्यका कर्णधार हुन् । विद्यार्थी जीवनमा राजनीति गर्नेहरु नै यो देशका भोलीका नेता हुन् । यो देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मन्त्रीसम्म हुने विद्यार्थी नै हुन् । तर, राजनीति सकारात्मक र स्वस्थ हुनुप¥यो । यहाँ मात्र होइन, देशव्यापी रुपमा बौद्धिक लडाईलाई सकारात्मक रुपमा लिइँनुपर्छ । विद्यार्थी विद्यार्थीमा वैचारिक लडाई हुनुपर्छ । प्राध्यापकहरुको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ प्लस टुको पनि पढाई हुन्छ । दुवै तहमा ५२,५४ जना उपप्राध्यापकलगायतका हुनुहुन्छ । नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा टिचरहरुवीच कुनै खालको राजनीतिक प्रतिसोध छैन । विभिन्न आस्था र विचारहरु सबैको हुन्छन् । त्यही आस्था अनुसार संघहरु पनि खुलेका छन् । त्यसलाई राजनीति गर्ने थलो भन्न मिल्दैन । क्याम्पस सञ्चालक समितिको कुरा गर्दा सञ्चालक समितिले क्याम्पसका हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी र मर्यादित रुपमा अघि बढाइरहेको छ । यहाँ कुनै खालको राजनीतिक खिचातानी छैन । बाहिर जति हल्ला छ, त्यो हल्ला मात्रै हो । क्याम्पसभित्र पस्दा उहाँहरु स्वतन्त्ररुपमा भित्र छिरेर कक्षा लिएर हिँड्ने हो । कुनै राजनीतिक वहसमा टिचरहरु संलग्न भए भन्दैमा बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तिको बारेमा नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन । राजनीति सकारात्मक भएमात्रै देशले समृद्धि हाँसिल गर्छ तर, नेपालमा राजनीतिलाई नकारात्मक रुपमा व्याख्या गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । भन्ने मेरो बुझाई हो ।
क्याम्पसमा आर्थिक अनियमितताको विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ नी ?
क्याम्पसमा आर्थिक अनियमितताको विषय सामाजिक सञ्चालदेखि प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया र विभिन्न विद्यार्थी संगठनले पनि कुरा उठाएको विषय हो । विद्यार्थी पनि मागपत्र सहित ध्यानाकर्षण गराउँदा सञ्चालक समितिले लेखा परीक्षण गराएर अघि बढ्ने निर्णय ग¥यौँ । लेखापरीक्षकले तीन चार दिन लगाएर लेखाका विल भौचरहरु अध्ययन गर्नुभयो, सञ्चालक समिति, विद्यार्थी र प्राध्यापक बसेर छानविन गरेको छ । छानविनमा आर्थिक अनियमितता भएको देखिँदैन । काम गर्ने सवालमा केही कमजोरी भएको भने देखिन्छ । तर, बजारमा आएजस्तो ठूलो अनियमितता भएको छैन । कुनै समान खरिद गर्दा लेखा अधिकृतले टिप्पणी उठाएर खरिद गर्ने चयन रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमानुसार नै हामीले आर्थिक लेखाजोखा र लेखापरीक्षण हुन्छ । सोही अनुसार लेखापरीक्षण गर्दा त्यस्तो अनियमितता भएको देखिँदैन ।
क्याम्पसको भावी योजना र अहिलेका मुख्य समस्या के के हुन् ?
नुवाकोटमा २०,२२ वटा कलेज रहेका छन् । सबै क्याम्पसहरुमा मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा संकायकै पढाई हुने गरेको छ । हामीले प्राविधिक शिक्षामा अलि बढी जोड दिने गरेका छौँ । केही नयाँ संकाय पनि हामीले सुरु गर्दै छौँ । हामीले क्याम्पसको स्तरोन्नतीको लागि कुलपति डिनप्रमुखसँग पनि बसेर छलफललाई अघि बढाएका छौँ । नयाँ नयाँ विषयहरु पढ्ने पाउने अधिकारलाई हामी स्थापित गर्न चाहन्छाँै । विश्व विद्यालय अनुदान आयोगमा छनौट भएको क्याम्पस हो । त्यहाँबाट क्याम्पसको भौतिक एवं शैक्षिक विकासको लागि ठूलो रकम सहयोग हुँदै आएको छ । त्यसैबाट यहाँ ठूलाठूला भवन बनेका छन् । अहिले हामीले आइसिटि अन्र्तगत पोजेक्टरबाट पढाई सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । आगामी दिनमा हामी डिप्लोमासम्म प्रोजेक्टर मार्फत पढाई सञ्चालन गर्दै छौँ । युजिसीमार्फत पिआरटि भिजिट भइसकेको छ । पीआरटीले सुझावको रुपमा प्रतिवेदन पनि दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन सञ्चालक समितिले अक्षरस पालना गर्नको लागि हामी प्रतिवद्ध छाँै । ती सुझावलाई क्रमिकरुपमा कार्यान्वयन गर्दै लगेको अवस्थामा सम्भवतः दशैं अघि प्रिभिजिट गराउने छौँ । फाइलन प्रिभिजिटमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने सबै कुरा भएमा परीक्षा, लेखा, पुस्तकालय, वातावरण, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक, कार्ययोजना सबै बुझेपछि फाइलन प्रिभिजिटले स्तरोन्नती गर्नको लागि क्युएए सर्टिफिकेट प्रदान हुने छ ।हामीले क्युएए सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको अवस्थामामास्टर डिग्रि र डिप्लोमा एक शैक्षिक सत्रमा दुई सय विद्यार्थीहरुले पढाई पूरा गरेमा प्रति विद्यार्थी ८० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्राप्त हुनेछ । यो अनुदान विद्यार्थीको टाउको गनेर प्राप्त हुन्छ । २०० देखि २२५ जना विद्यार्थी भएमा पौने दुई करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँसमम्म आर्थिक अनुदान प्राप्त हुनेछ । त्यो बाहेक अन्य भौतिक एवं शैक्षिक विकासको लागि विश्व विद्यालय अनुदान सहयोगले निरन्तरता पाइरहने छ । क्युएए सर्टिफिकेटका लागि कलेजको सिंगो टिम लागिरहेको छ । अहिले युजिसीले क्याम्पसको लागि यो आर्थिक वर्षमा साढे चार करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ । हामीले शैक्षिक विकासको लागि आइटिसी मेट्रियल्स, पुस्तकाकालय, ल्यावटप, फोटोकपि मेसिनलगायतका उपकरण खरिदको लागि टेण्डर आव्हान गरिसकेका छौँ । आगामी शैक्षिक सत्रबाट हामी सबै फ्याकल्टीमा ल्यावटप र प्रोजेक्टरबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने हुनेछौँ । विश्व विद्यालय अनुदान आयोगको सहयोग हाम्रो लागि अमूल्य रहेको छ । आगामी दिनमा पनि आयोगसहित अन्य दाताहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।
अन्तमा क्याम्पसको विषयमा नुवाकोटवासीलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो क्याम्पस नुवाकोट, रसुवा र धादिङको केन्द्रविन्दुमा रहेको कलेज । त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्र्तगत रहेको कलेज । नुवाकोटको शैक्षिक विकासको छाताको रुपमा यो क्याम्पस रहेको छ । यो कलेजको शैक्षिक विकासको लागि योजनावद्ध रुपमा माष्टरप्लान बनाएको छ । नुवाकोटको शैक्षिक विकासको अग्रणी अभिभावकको रुपमा रहेको यो कलेजको शैक्षिक एवं भौतिक विकासमा सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षासहित क्याम्पसलाई गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छाँै ।